September 5, 2011 by chowutyee
Posted in ကိုရီယားချက်ပြုတ်နည်း | 31 Comments
ဟုတ်ကဲ့ ဆန်ကိတ်လေးတွေ readymade ၀ယ်လို့ရရင် ပိုလွယ်တာပေါ့… အားရင် လုပ်စားကြည့်ပါ.. 😀
ချက်ပေးပါ့မယ် hanlay!! 😀
Look so yummy and never tried it before so treat me 🙂
စိတ်ဆိုးပါဘူး ဖြူရယ်။ ကိုယ်မသိတာ သိခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးပါနော်… တော့ပူကီကို အရမ်းလုပ်စားချင်တာ။ အစက ဆန်ကိတ်လုပ်နည်းမသိလို့။ နောက်သိသွားမှ လုပ်စားဖြစ်တာ။ အသားပြားတွေတော့ လုပ်နည်း ရှာကြည့်ပြီ ပြန်ချက်ကြည့်အုန်းမယ်။ ၀တ်ရည်ကတော့ အမဲသားကို နှုတ်နှုတ်စဉ်းပြီ ကြော်ပြီ ထည့်စားတယ်။ နောက်လည်း ကွန်မက် ပေးပါ.. Thanks par .. 🙂
ဟားဟား မချော အဲဒီအကြံကောင်းတယ်။ သူတို့ဆီသွားမနေနဲ့ ၀တ်ရည်ဆီပဲ လာလည်နော်။ ၀တ်ရည် ကိုရီးယား ဟင်းချက်နည်းတော်တော်များများ ချက်တတ်တယ်.. 😀
၀တ်ရည်ကလည်း ကျေးဇူးပါ … 😀
မှီရေ ကြိုးစားပြီ နောက်မှ ပင်လယ်စာထမင်းကြော် ချက်နည်းလေး တင်ပေးပါ့မယ်။ အားပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်.. 😀